अर्थ Archives - Tara Khabar
झापा । अर्जुनधारा नगरपालिकाले यस आर्थिक बर्षको लागि नदीजन्य सामग्री उत्खनन, संकलन र निकासी ठेक्काको लागि प्रक्रिया शुरु गरेको छ । नगरपालिकाले यसबर्षको लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइइ) गरेर नदीजन्य सामग्री उत्खनन प्रक्रिया शुरु गरेको हो । गतबर्ष ठेक्का नलाग्दा नगरको करोडौं रुपैयाँ राजश्व गुमेको थियो । नगरपालिको आन्तरिक आम्दानी गुमेपछि गतबर्षको बिकासका योजना प्रभावित… Continue reading अर्जुनधाराबाट नदीजन्य सामग्री उत्खनन,संकलन र निकासी ठेक्काको लागि प्रक्रिया शुरु
Published २०७७ श्रावण १४, बुधबार प्रकाशित
Categorized as अन्तरास्ट्रिय, अन्तर्वार्ता, अर्थ, खेलकुद, जीवनशैली, प्रदेश, प्रवास, प्रविधि, फिचर, मनोरञ्जन, राजनीति, रोचक, विचार, शिक्षा, समाचार, स्वास्थ्य, हेडलाइन
अमेरिकाले टिकटकसहित चिनियाँ एपहरुलाई प्रतिबन्ध गर्नेबारे सोचिरहेको सेक्रेटरी अफ स्टेट माइक पम्पेओले बताएका छन् । फक्स न्यूजमा लाउरा इंग्राहमसँगको अन्तरवार्तामा पोम्पेओले यसबारे गम्भीररुपमा विचार गरिरहेको बताएका हुन् । पोम्पेओलाई इंग्राहमले अमेरिकाले टिकटकजस्ता चिनियाँ सामाजिक सञ्जाल एपहरु प्रतिबन्धबारे के सोचिरहेको भनेर प्रश्न गरेकी थिइन् । जवाफमा पोम्पेओले भने, ‘जनताको मोबाइलमा चिनियाँ एपको बारेमा अमेरिकाले सही निर्णय… Continue reading अमेरिकामा पनि टिकटकमाथि प्रतिबन्धको तयारी
Published २०७७ असार ३१, बुधबार प्रकाशित
अमेरिकामा हत्याका अभियुक्त ड्यानियल लुइस लीलाई मृत्युदण्डको सजाय दिइएको छ । सर्वोच्च अदालतले मृत्युदण्डको सजाय दिन अनुमति दिएको केही घण्टापछि डेनियललाई विषको इन्जेक्सन लगाइएको बीबीसीले जानकारी दिएको छ । अमेरिकामा १७ वर्षपछि कुनै संघीय अभियुक्तलाई मृत्युदण्ड दिइएको हो । सोमबार एक न्यायाधीशले अझै पनि कानूनी चुनौती विद्यमान भएकोले थुप्रै अभियुक्तको सजाय रोकिने गरेको बताए । मृत्युदण्डको… Continue reading अमेरिकामा १७ वर्षपछि अपराधीलाई दिइयो मृत्युदण्ड, विषको इन्जेक्सन लगाइयो
काठमाडौं । बाल्ट्राले अटोमेटिक ह्यान्ड स्यानिटाइज डिस्पेन्सर बजारमा ल्याएको छ । नवीनतम र उच्चस्तरीय प्रविधिहरुको प्रयोग गरी बनाइएको यस ह्यान्ड स्यानिटाइज डिस्पेन्सरको माध्यमबाट नछोइकनै आफ्नो हात सुरक्षित तरिकाले स्यानिटाइज गर्न सकिन्छ । नौं लिटर स्टोरेज क्षमता भएको यस ह्यान्ड स्यानिटाइज डिस्पेन्सरमा तुरुन्त स्यानिटाइज गर्न सकिने, छुन नपर्ने, शक्तिशाली स्पे्र जस्ता विशेषताहरु रहेको बाल्ट्राको यस अटोमेटिक… Continue reading बाल्ट्राको अटोमेटिक ह्यान्ड स्यानिटाइज डिस्पेन्सर बजारमा
Categorized as अर्थ
कोरोना भाइरसका कारण विश्वभरकै अर्थतन्त्र प्रभावित छ । नेपालमा पनि यसको प्रभावमा सबै क्षेत्र परेका छन् । कोरोनाकै कारण देशको जीडीपीमा संकुचन आउने सरकारी आँकलन छ । यस्तो असामान्य अवस्थामा गुज्रिएको देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन एनआईसी एसियाले केही स्कीम ल्याएको छ । ग्राहकका सुविधाका लागि ल्याइएको स्कीमका बारेमा एनआईसी एसिया बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशन… Continue reading एनआईसी एसियाको स्कीम नै स्कीमः ५ दिनभित्र साँवा –ब्याजको रकम भुक्तान गर्नेले पाउनेछन् ब्याजदरमा सहुलियत
Categorized as अन्तरास्ट्रिय, अन्तर्वार्ता, अर्थ, खेलकुद, प्रदेश, प्रवास, प्रविधि, मनोरञ्जन, राजनीति, विचार, शिक्षा, समाचार, स्वास्थ्य, हेडलाइन
गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तरर्गतको स्वास्थ्य समितिका अनुसार विदेशमा कोरोना भाइरसका कारण निधन हुने नेपालीको संख्या र संक्रमणको दर उल्लेख्य रुपमा कमी हुँदै गएको छ । संघका अनुसार जम्मा कोराना संक्रमित मध्य ९२ प्रतिशत नेपालीहरु कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन् । शनिवार साँझसम्म विश्वभर संक्रमित २९ हजार ६ सय २४ जना मध्ये २७ हजार ३ सय… Continue reading विदेशमा संक्रमितमध्ये ९२ प्रतिशत नेपाली संक्रमणमुक्त
Published २०७७ असार ३०, मंगलवार प्रकाशित
Categorized as अन्तरास्ट्रिय, अन्तर्वार्ता, अर्थ, जीवनशैली, प्रवास, मनोरञ्जन, विचार, समाचार, स्वास्थ्य, हेडलाइन
यो समय पुरा विश्व कोभिड–१९ को महामारीको चपेटामा छ । यसका लागि एक भाइरस जिम्मेवार छ, जसलाई नोभल कोरोनाभाइरस अथाव सार्स कोभ–२ नाम दिइएको छ । मानवसभ्यतामाथि कहर बर्साउने यो पहिलो भाइरस भने होइन । भाइरसले कयौँ पटक मानवतामा भयंकर चोट पुर्याएको छ । सन् १९१८ मा कहर बर्साएको इन्फ्लुएन्जा भाइरसले पाँचदेखि १० करोड मानिसको… Continue reading भाइरस नहुँदो हो त मान्छेले बच्चा जन्माउनुको साटो अण्डा पार्ने थियो
मौद्रिक नीतिमा के आउँदैछ ? निजी क्षेत्रमैत्री हुने गभर्नरको संकेत
२९ असार, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि मौद्रिक नीति ल्याउन अन्तिम गृहकार्य गरिहेको छ । कोरोना महामारीले उत्पन्न आर्थिक संकटका बीच आउन लागेको मौद्रिक नीतिमा धेरैका अपेक्षा जोडिएका छन् । अहिले बैंकसँग पर्याप्त तरलता छ । कर्जा लिन आउनेहरुको संख्या एकदमै कम । उद्योगी–व्यवसायीले यतिबेला सरकारसँग ठूलो राहतको अपेक्षा… Continue reading मौद्रिक नीतिमा के आउँदैछ ? निजी क्षेत्रमैत्री हुने गभर्नरको संकेत